PropEstate Myanmar is the real-estate service company which is located in Yangon. We specially perform renting and selling services of house, apartment, condo, offices, commercial space and every services of real-estate for our valuable customer. And also give sales and purchase for Land and Building, Land Registration (Sale and Lease), Land Title Change, Lease Agreement for Land and Building, Apartment and Factory, and Registration for Trade Mark services.
PropEstate Myanmar real-estate Company သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး လုံးခြင်းအိမ်၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ ရုံးခန်း၊ စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးမြေနေရာနှင့် အခြားအိမ်ခြံ‌ေြမအကျိုးဆောင်နှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မြေရောင်း၀ယ်ခြင်း၊ မြေအမည်ပေါက်လျှောက်ထားခြင်း (အရောင်းအငှား)၊ မြေအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး မြေ၊ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ ငှားရမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း အစရှိသည့် ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများကိုပါ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Not to occur any disturbance between seller and buyer or lessor and lessees, we deliver our best endeavors to any party.
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် ရောင်းသူ၊ ၀ယ်သူနှင့် ငှားရမ်းသူအကြားတွင် အခက်အခဲမရှိစွာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အထူးကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
We have years of experience consulting in this fields with various projects with successes.
အိမ်ခြံမြေနှင့် ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး Project များစွာကိုလည်း ေအာင်မြင်စွာဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်။
We have expert agents and consultants for you to deliver best services.
ထို့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အတိုင်ပင်ခံများလည်းရှိပါသည်။
We provide real-estate laws and regulations for selling and renting of every real-estate activity.
အိမ်ခြံမြေနှင့်ပတ်သက်၍ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း အစရှိသော အိမ်ခြံမြေဥပဒေများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
We provide consolation service between owner and tenants to get the best price and satisfying according to Myanmar’s laws and regulations.
ရောင်းသူနှင့်ဝယ်ယူသူအကြား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဝယ်ယူခြင်းကိစ္စများ အဆင်ပြေစေရေးအတွက် ဒေသအလိုက်ကာလပေါက်ဈေးများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
Our expert consultants will help both owner and tenants to make the contract according to Myanmar’s laws and regulations so, you do not need to worry about illegal issue.
ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်သူကြား အရောင်းအဝယ်ကိစ္စရပ်များတွင် အရှုပ်အရှင်းကင်းစွာဖြင့် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ အဆအချိန်တိုအတွင်း ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်၀န်‌ေဆာင်မှုပေးခြင်း။
Mr. Myo Win isaDirector of Legal Industry. He is alsoaFounder/Managing Partner of Myo Win & Associate Law Firm which isaconsulting organization of Prop Estate Myanmar. Moreover, he has performed asaLegal Consultant of different type of Legal Corporation. Mr. Myo Win has advised and proceeded many Real Estate Projects such as 10,000 acre of Industrial Park Project, 600 acre of Eco Tourism Hotel Project, Condominiums, Industrial Land, and Residences. He also supports asalegal consultant at one of leading Real Estate Corporations.
ဦးမျိုးဝင်းသည် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ Director ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် PropEstate Myanmar ၏ ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့စည်းဖြစ်သော Myo Win & Associates Law Firm ၏ Founder/ Managing Partner တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်သူသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဥပဒေအဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုး၏ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည်ဧက 10,000 ကျော်အကျယ်အဝန်းရှိ Industrial Park Project ၊ ဧက 600ကျော်အကျယ်အဝန်းရှိ Eco Tourism Hotel Project ၊ ကွန်ဒိုမီနီယံများ၊ စက် မှုဇုန်မြေကွက် များ၊ လူနေအိမ်တိုက်ခန်းများ စသည့် Real Estate လုပ်ငန်းများစွာကို ဥပဒပိုင်းအရ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်သူသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာမည်ကြီး Real Estate ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု၏ဥပဒေအကြံပေး တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။
U Myo Zaw, who is motivated Estate Agent professional with over 10 years in Myanmar. In 1996, got B.E (Electrical Power) from Mandalay Institute of Technology. Experience in Designing, electrical installation of house wiring, construction of housing and infrastructures. More than 10 year experience in WASH Engineer (Water Supply, Sanitation and Hygiene).
ဦးမျိုးဇော်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတွေ့အကြုံ ၁၀နှစ်ရှိသည့် ကျွမ်းကျင်သည့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။. B.E (Electrical Power) ဘွဲ့ကို ၁၉၉၆ တွင် မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှရရှိခဲ့သည်။ ဒီိဇိုင်းဆွဲခြင်း, အိမ်သုံး၀ိုင်ယာလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း, အိမ်ရာနှင့်အဆောက်ဦးများဆောက်လုပ်ခြင်း တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ WASH Engineer (ရေပေး၀ေခြင်း, မိလ္လာနှင့်ရေဆိုးစနစ် နှင့် ပတ်၀န်းကျင်သန့်ရှင်းရေး) တွင် ၁၀နှစ်အထက်အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
Need Help? Join Us.
. No(128/130), 1st floor, 35 Street(Middle), KyaukTaDa Township, Yangon, Myanmar
09 5150052 | 01 380204
Copyright © 2019 PropEstateMyanmar | Design: TooB